Uma kwenzeka kungekho noyedwa oqaphelayo, abantu emhlabeni wonke bathembele kwi-smartphone yabo yonke into. Kungani? Singena eminyakeni yobuchwepheshe. Ama-algorithms obuchwepheshe bohlelo lokusebenza enza ukwenza imisebenzi eyahlukahlukene isebenze kahle futhi ikhiqize. Ngokwenza njalo, inqubo isheshise indlela esisebenza ngayo futhi yalinganisa inkundla yokudlala emhlabeni wonke. Ubuchwepheshe be-Smartphone manje sebuyingxenye eyinkimbinkimbi yempilo yawo wonke umuntu emhlabeni jikelele. Njengoba abantu befunda wonke amakhono wezinhlelo zokusebenza aklanyelwe izidingo zabo ezithile kwi-smartphone, bayakwazisa kakhulu amadivayisi abo. Kungakho abantu abaningi basebenzisa ngaphezulu kwe- $ 1,000 US ngalezi zinsiza; esikhathini esidlule, ubani owayengakubona ngeso lokhozi lokho? Ama-Smartphones asebenzisa ngaphezu kwamakhompyutha wedeskithophu kulezi zinsuku ngoba awabophi muntu endaweni eyodwa. Bangaba yiselula, okubavumela ukwenza imisebenzi eminingi ukuze bakwazi ukufeza okuningi ngesikhathi esincane; Kungakho ama-smartphones eba yinto yanamuhla.
Ikusasa lobuchwepheshe lizoshintsha indlela esikwenza ngayo konke, futhi noma ngabe noma cha, umuntu uyalwamukela ushintsho, ulapha ukuhlala. Isibonelo, abantu babheka ngisho nezimoto ezidlula uphethiloli ezimotweni zikagesi; leyo yindlela ende ukusuka ehhashi nasekalishi. Cabanga nje ukuthi ihhashi nenqola kuzokuthatha kusuka ku-A kuye ku-B njengemoto kagesi kepha hhayi ngenduduzo efanayo noma ngejubane. Ngabe ungafuna ukugibela ihhashi nenqola ezweni lanamuhla njengendlela yakho ejwayelekile yokuhamba? Bheka i-Amazon; isibonelo, umsunguli wamukela ubuchwepheshe, futhi kungakapheli neminyaka embalwa, i-Amazon isiphenduke ibutho lokucabanga. Iqiniso ngukuthi, ngaphandle kobuchwepheshe, kufana nokuthi usebenzisa ihhashi nenqola ukuzulazula.
Liyini iphuzu lalesi sihloko? Ukuvumela umfundi abone ukuthi ngobuchwepheshe, kufanele sivumelane nezindlela ezintsha zokwenza izinto ezindala ezifanayo. Isibonelo, ochwepheshe abaningi bezezakhiwo bangahlangana nothile babanikeze ikhadi labo lebhizinisi ngethemba lokuthi ngelinye ilanga, lowo muntu uzobiza ukwenza ibhizinisi nabo. Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa wesikhathi, abakaze babuze umuntu abadlulisele ikhadi lakhe inombolo yakhe yocingo ngoba abakaze bayicabange, bacabange ukuthi kungazwakala kunzima, noma bengafuni ukuhlangabezana nolaka kakhulu. Kodwa-ke, ukulandisa kuyashintsha lapho uchwepheshe wezezakhiwo ethula ubuchwepheshe ku-equation. Isibonelo, kuthiwani ngomuntu ohlangane naye lapho usuka lapho, "Bekumnandi ukukhuluma nawe ake ngithole inombolo yakho yocingo ukuze ngikwazi ukwabelana nge-My SphereCard nawe ukuze uzoyithola noma nini lapho uyidinga." Amaphesenti angama-99.9 bakunikeze inombolo yabo yocingo; ngakho manje uzenzele ukuhola. Usebenzisa le ndlela, awuzihluphi noma ube nolaka kakhulu lapho ucela inombolo yocingo yomuntu.
Abathengi abaningi bazothakazelisa ngokuthola okunye ukusetshenziswa kwe-smartphone yabo. Iphinde yethule ucingo oluhle kakhulu olulandelwayo oluvela kuwe ubabuze ukuthi ngabe balulande yini uhlelo lokusebenza ukwenza kube lula kubo ukuthola zonke izinto abadinga ukuzazi ngokuthengiswa noma ukuthengwa kwezindlu. Bazise ukuthi kulula ukuxhumana nawe futhi ugcine inombolo yakho koxhumana nabo ngqo kusuka ku-SphereCard yakho.
Kufanele ubavumele bakugcine njengentandokazi yabo, ukuze bakwazi ukukukhumbula ngokushesha kusuka kuhlelo lokusebenza ukuze uzotholakala ukuphendula noma imiphi imibuzo abangaba nayo. Futhi, lapho ubabhalisa njengomthengi, bazokwazi ukuthumela nokwamukela imilayezo evikelekile phakathi kwenu nobabili. Lowo mkhuba ukuvumela ukuthi ubone ngaphakathi kwesici somlayezo wakho uhlu lwabathengi bakho njengoba lukhula konke ngaphakathi kohlelo lwakho lokusebenza. Lapho umthengi ebhalisa futhi exhuma kuwe ngesici somlayezo, uzokwazi ukuphusha isaziso kumthengi ngokuthanda okukhombisa ingxenye yomyalezo wakho ku-smartphone yomthengi. Lesi sici sokuthumela imiyalezo sizokukhumbuza lapho ugcine khona ngokuxhumana kwakho nomthengi, okusiza kakhulu ukukhumbula lapho usebenzelana nabathengi abaningi.
Abathengi bakhetha ukwenza ibhizinisi nochwepheshe bezindlu abathandekayo. Ukumaketha kwakho kufanele kudlulise umqondo wokuthi ungumuntu onobungane. Akuwona umqondo omuhle ukuthi uyangeneka; kungcono ukukukhombisa, ngakho-ke ukubonakala kobungane bakho kukulethwa kwakho. Ividiyo yabantu abakhuluma ngawe ukuthi uyasiza iyamukeleka noma ividiyo yakho ikutshela ukuthi ungasiza kanjani kufanele iveze ukuthi unesimo esifudumele. Ukuba nemfudumalo kwenza abantu bazizwe bekhululekile ukukhuluma nawe futhi bavuleke ukuze uthole izidingo zabo ukuze ubenzele isixazululo esifanelekile. Lapho abantu bengazizwa bekhululekile uma unawe, imvamisa, kuholela ekungaqondisisini okudala izikhalazo ezingasho lutho ngawe.
Sengiphetha, inkathi yobuchwepheshe idala ijika lokufunda ngokuthi asilifakanga kabusha isondo kepha kunalokho silithuthukisile. Isibonelo esilula umuntu obuka ezentengiselwano, futhi ufuna ukuthola inombolo yocingo ngaphambi kokushintsha kwesikrini; Okwamanje, bane-smartphone yabo eceleni kwabo kepha abakaze bacabange ukukusebenzisa ukuthatha isithombe sentengiso. Kunalokho, bafuna iphepha nepensela ukuze babhale igama nenombolo yocingo, besebenzisa imikhuba yakudala. Lapho uma umuntu ethatha isithombe sentengiso yethelevishini, bekuyoqeda ukuthi kungenzeka kube nephutha ekukopisheni inombolo yocingo ngokungeyikho futhi ulahle imininingwane. Kulesi sibonelo, kukhombisa ukuchitha isikhathi ngokwenza ngendlela yakudala. Futhi, ungahlala uprinta ikhophi yesithombe ukuze ube nekhophi lephepha njengesipele. Ngaleyo ndlela, indlela endala yephepha isekela ijubane lendlela entsha.
Abathwali befoni basuka ku-3G naku-4G baya ku-5G, okuyindlela esheshayo yokuthumela nokulanda imininingwane kumadivayisi weselula ahlakaniphile. Lapho i-5G itholakala emhlabeni wonke, kuzoba nethuba lokuthi idivayisi yakho isingathe ubuhlakani bokufakelwa ukuphatha imisebenzi ejwayelekile yokuthengisa ezokukhulula ukuphatha umsebenzi wakho wezezakhiwo.
I-SphereCard App imahhala.
Ukuqhubekela Phambili Nje